China Electrical Junction boaty sy famolavolana mpanamboatra sy mpamatsy | Mestech
Vata fitifirana elektrikadia be mpampiasa amin'ny fampitana sy fizarana hery sy serasera. Ny ampahany lehibe amin'ny akorandriaka sy ny fonony dia ny plastika vokarin'ny famolavolana tsindrona.
Ny boaty fitifirana elektrika dia be mpampiasa amin'ny fampitana sy fizarana herinaratra sy fifandraisana. Ny ampahany lehibe amin'ny akorandriaka sy ny fonony dia ny plastika vokarin'ny famolavolana tsindrona. Ny boaty fihaonana dia mila manaraka fenitra fampisehoana herinaratra henjana, noho izany hampahafantarinay eto ny boaty sy ny famolavolana.
Inona no atao hoe boaty plastika
Ny boaty fihaonan'ny herinaratra dia antsoina koa hoe boaty mampifandray, boaty terminal, mpampitohy herinaratra, tobin'ny terminal.
Ny boaty fihaonan'ny herinaratra dia fonenana misy herinaratra fonenana, hiarovana ireo fifandraisana ary hanome sakana fiarovana.
Ny boaty kely misy vy na plastika dia mety mamorona ampahany amin'ny lalan-jiro elektrika na rafitra tariby thermoplastic-sheathed (TPS) ao anaty trano.
Raha natao ho an'ny fametrahana ambony dia ampiasaina amin'ny valindrihana, ambanin'ny gorodona na afenina ao ambadiky ny tontolon'ny fidirana - indrindra amin'ny trano anatiny na trano fivarotana. Ny karazana mety (toy ny aseho amin'ny ankavia) dia mety halevina ao anaty plaster amin'ny rindrina (na dia tsy avelan'ny kaody sy fenitra maoderina intsony aza ny fanafenana feno azy) na hatsipy anaty beton - miaraka amin'ny fonony ihany no hita.
Boaty elektrika plastika manana ny plus sy ny minus. Satria plastika izy ireo, dia tsy ilaina ny mampiditra tariby tariby aminy. Satria vita amin'ny fitaovana tsy mitarika, ny switch sy ny outlet dia tsy afaka mivoaka raha mikasika ny sisin'ny boaty izy ireo.
Matetika ny boaty plastika dia misy lavaka fikosoham-bary mba hikiraisana mora foana ny switch sy ny outlet. Ireo boaty ireo dia tonga amina andian-jiolahim-boto, andian-dahalo, ary na dia ny fanitsiana andian-andian-dahalo aza
Karazana boaty fitifirana elektrika
Ny karazana boaty elektrika dia misy karazany: karazana anatiny, karazana ivelany, karazana fanoherana mahery vaika ary karazan-drano. Miovaova arakaraka ny tontolo sy firenena samihafa ny zavatra ilaina sy ny fiarovana. Noho izany ny lasitra fanindronana sy ny fanodinana fananganana dia hafa ihany koa.
1. boaty fihaonan'ny herinaratra anaty trano.
Karazana résin: ABS, PVC
Ny ankamaroan'ireo dia boaty tariby misy birao sy birao. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fizarana herinaratra anaty trano sy fanaraha-maso afovoany, ary koa ny famatsiana herinaratra on-off, ary ny fidirana sy ny fifehezana ny tsipika fifandraisana. Ny volan'ny asa ankapobeny dia ambanin'ny 250 volt. Ny resina plastika dia takiana amin'ny fanajana ny laharan'ny UL94 V1 ~ V0 misy retardant amin'ny lelafo.
2. boaty fihaonan'ny herinaratra ivelany.
Karazana résin: ABS, ABS / PC
Ny boaty fihaonana ivelany dia takiana mba hahafahana miaritra ny hafanana any ivelany avo sy ambany ary ny hamandoana amin'ny orana sy ny tara-pahazakan'ny tara-pahazavana, ny firafitry ny vokatra tsy tantera-drano, ny fahanterana amin'ny taratra ultraviolet, mifanaraka amin'ny tontolo iainana avo sy ambany. Ilaina ny mampiasa plastika avo lenta, toy ny PC na nylon, miaraka amin'ny additives manokana miaraka amin'ny fanoherana ultraviolet tena tsara sy ny fiakaran'ny maripana avo sy ambany.
3. boaty fihaonana indostrialy.
Karazana résin: ABS, ABS / PC, Nylon
Boaty fihaonana indostrialy, matetika dia misy fepetra takiana manokana amin'ny fampisehoana, toy ny refy sy ny fahamarinan-toerana, ny fanoherana ny solika sy ny alkali, ny fanoherana. Ny fitaovana plastika dia tokony hofidina amin'ny fepetra samihafa ary tokony hofaritana tsara ny bobongolo.
4. boaty fitifirana herinaratra avo lenta.
Ny boaty fihaonambe dia ampiasaina amin'ny tontolo iainana avo lenta, toy ny lalimoara elektrika, boaty fanaraha-maso elektrika, fitaovana fizarana. Ilaina ny fitrandrahana tsara sy ny fanoherana ny fahanterana. Nylon sy ny plastika injeniera hafa dia matetika no voafantina.
5. Ny tena fiasan'ny boaty fihaonan-dahatsoratra photovoltaic dia ny mampifandray sy miaro ny modely photovoltaic amin'ny masoandro, mitarika ny vokarin'ny fotodrafitrasa photovoltaic ankehitriny. Amin'ny maha singa iray manan-danja ny maodelin'ny sela masoandro, ny boaty fihaonan'ny maodra photovoltaic dia vokatra feno izay mampifangaro ny famolavolana herinaratra, ny famolavolana mekanika ary ny fampiharana ara-materialy. Manome ny mpampiasa drafitra fampifandraisana mitambatra amin'ny modely photovoltaic solar.
6. boaty fihaonana tsy tantera-drano.
Karazana résin: ABS, ABS / PC, PPO
Misy fenitra roa amin'ny famonoana rano.
A. Fantsahana ivelany fohy, izany hoe ny rano dia tsy araraka mivantana amin'ny vokatra.
B. Aroboka anaty rano ny vokatra.
Miankina amin'ny firafitry ny faritra plastika toy ny:
Ampidiro ny peratra fanisiana tombo-kase amin'ny mpiray na amin'ny fanokafana;
Fanamafisana ultrasound amin'ny tonon-taolana roa:
Famolahana tsindrona tsy tapaka.
Vata fitifirana tsy tantera-drano
Boaty fitifirana plastika ivelany
Boaty fihaonan'ny jiro ao an-trano
Tee boaty plastika
Fampiasana plastika mahazatra boaty
Boaty fitifirana plastika misy nylon
Fepetra ilaina amin'ny fampiasana boaty fitifirana elektrika
Ny boaty fampifandraisana elektrika dia mifamatotra akaiky amin'ny herinaratra ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny fenitra fiarovana na fepetra takiana, indrindra:
1. Fanoherana ny toetrandro: fanoherana ny maripana avo sy ambany, hamandoana
2. Fanamafisana ny herinaratra
3. Fanoherana ny herinaratra avo lenta, ny diélectrique tsy tapaka ary ny fahaverezana diélectrique: Afaka miasa amin'ny herinaratra avo na ambany, antonony ary haavo elektrika matetika.
4. Fanaparitahana ny hafanana: ny hafanana ateraky ny faritra anatiny dia azo alefa haingana kokoa.
5. Tapitra ny lelafo: Tsy mora ny mandrehitra afo sy miteraka afo.
6. Taratra fanoherana ultraviolet: Rehefa eo amin'ny hazavana mahery na tontolo iainana ny boaty fihaonana elektrika dia tsy ho antitra sy tsy hahomby noho ny taratra ultraviolet.
7. Fiadiana amin'ny harafesina: Amin'ny tontolo asidra, alkaly ary sira, dia tsy hanimba sy hanimba, ary afaka miasa mandritra ny fotoana maharitra.
8. famehezana sy tantera-drano: afaka miasa amin'ny tontolo lena na rano
9. Fiarovana ny tontolo iainana: Hamarino fa ireo fitaovana ampiasaina dia hamoaka akora misy poizina na setroka rehefa mafana na may, izay hanimba ny fahasalaman'ny olombelona.
Famerenana endrika ny boaty fifandraisana elektrika
1. Safidy ara-materialy: Amin'izao fotoana izao, ny sehatry ny fampiharana indrindra ny vokatra boaty tsy misy rano tsy mitombina dia tranokala fananganana henjana sy tranokala misokatra. Ny fanoherana ny fiantraikany, ny tanjaky ny enta-mavesatra, ny fananana insulation, * ny tsy fanapoizinana, * ny fanoherana ny fahanterana, ny fanoherana ny harafesina ary ny faharetan'ny lelafo dia tokony hojerena rehefa dinihina ny fahombiazan'ny vokatra. (Ny fahombiazana tsy misy poizina dia be fanahiana, indrindra satria raha toa ka tsy miteraka gazy misy poizina sy manimba ny fandoroana dia matetika raha sendra misy afo vokatry ny fofoka entona gazy misy poizina marobe ary ny fahafatesana no nanisa ny maro an'isa.
2. Volavola firafitra: ny fiheverana dia tokony homena ny tanjaka ankapobeny, ny hatsarany, ny fanodinana mora, ny fametrahana mora foana ary ny fanodinana ireo boaty fihaonan'ny rano. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra boaty fihaonan'ny rano novokarin'ny mpanamboatra iraisam-pirenena lehibe dia tsy misy faritra vy, izay afaka manamora ny fizotry ny fanarenana vokatra. Na izany aza, ny fitaovana ampiasain'ny ankamaroan'ny mpanamboatra ao an-trano dia samy hafa, ary ny toetran'ny anti-waxy an'ny fitaovana dia ratsy. Amin'ny ankapobeny, ny fampidirana varahina dia apetraka ao amin'ny socket fametrahana ny boaty fitadiavana rano mba hampitomboana ny tanjaky ny fametrahana, izay hampiakatra ny fotoana sy ny vidiny ho an'ny fanarenana fitaovana. Ny olana toy izany dia azo vahana amin'ny fisafidianana akora misy fika fampisehoana avo lenta nomen'ny mpanamboatra mahazatra.
3. Hatevin'ny rindrina: Amin'ny ankapobeny, rehefa dinihina ny vidin'ny vokatra rehetra, ny hatevin'ny rindrin'ny vokatra dia tokony hahena araka izay azo atao mba hahatratrarana ny fanoherana ny fiatraikany sy ny fanoherana ny waxy an'ny vokatra. Amin'ny famolavolana boaty fihaonambe iraisam-pirenena, ny hatevin'ny rindrin'ny fitaovana ABS sy PC dia eo anelanelan'ny 2.5 sy 3.5 mm matetika, ny polyester vita amin'ny fibre vera dia eo anelanelan'ny 5 sy 6.5 mm, ary ny hatevin'ny rindrin'ny akora vita amin'ny alim-baravarankely dia eo anelanelan'ny 5 sy 6,5 mm. Eo anelanelan'ny 2.5 sy 6. Ny hatevin'ny rindrina dia tokony hamboarina mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny ankamaroan'ny singa sy kojakoja.
4. Fisafidianana fitaovana vita amin'ny peratra famehezana: Ho an'ny vokatra boaty fihaonana tsy misy rano, ny peratra fametahana tombo-kase ampiasaina matetika dia: PUR, EPDM, Neoprene, Silicon. Ny mari-pana, ny fanoherana ny fihenjanana, ny tahan'ny fanitarana, ny hamafiny, ny hakitroky ny tahan'ny famatrarana ary ny fanoherana ny simika dia tokony hojerena rehefa misafidy peratra famehezana.
5. Fitaovana fikiraisana tsy misy rano tsy miova: raha toa ka mitambatra ny fonon-tsampona sy ny fotony, ny singa fototra dia ny kofehy. Ny fisafidianana fitaovana bolt dia manakiana ihany koa. Ny fitaovana fampiasa matetika dia ny PA (nylon) na ny firaka PA, ary ny visy vy tsy mitongilana vy azo ampiasaina ihany koa. Ny tanjaky ny firafitra dia tokony hodinihina amin'ny famolavolana visy ambony. Satria samy hafa ny fomba fampiasan'ny mpampiasa isan-karazany ary mifanaraka amin'ny takiana isan-karazany, toy ny fametrahana biriky elektrika sy fametrahana tanana, ny herin'ny tady visy dia tokony hodinihina amin'ny endrika.
Famolavolana sy famolavolana boaty elektrika
Ny ampahany lehibe amin'ny boaty fihaonana dia ny fonenana plastika sy fonony. Izy ireo dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fomba fanindronana plastika. Ny fitaovana dia bobongolo tsindrona.
Ny famolavolana ny bobongolo tsindrona boaty dia miankina amin'ny firafitry ny famolavolana sy ny fivoahan'ny boaty fihaonana, izay mamaritra ny firafitry ny bobongolo sy ny lavaka.
Ny vy sy ny hamafin'ireo tsiranoka bobongolo dia miankina amin'ny charactor résin plastika, ny firafitry ny vokatra ary ny ain'ny lasitra. Ny Steel P20 dia matetika ampiasaina ho toy ny akora fampidirana bobongolo ho an'ny baiko mahazatra, ary ny S136 dia ampiasaina ihany koa ho an'ny gloss avo. Ho an'ny baiko lehibe momba ny vokatra dia ilaina ny bobongolo maro rongony hampitomboana ny fahafahan'ny famokarana.
Bobongolo vita amin'ny tsindrona plastika boaty
Mestech dia nanangona traikefa manan-karena amin'ny fanaovana famokarana bobongolo sy tsindrona ho an'ny boaty fihaonambe ho an'ny mpanjifa maro. Raha manana ny fangatahana faritra plastika ao amin'ny boaty fihaonana ianao, mifandraisa aminay.
Previous: Ny faritra plastika amin'ny fanadiovan-drano
Manaraka: Volo plastika amin'ny tariby sy tariby
Audio fonenana plastika mpandahateny
Fefy plastika an-tariby video
Ampahany plastika amin'ny jiro tsy misy alokaloka
Ny faritra plastika amin'ny fanadiovan-drano